विनाउद्घाटन र समापन नहुँदै आठौं राष्ट्रिय खेलकुद सकेर खेलाडी घरघर फर्किए – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
प्रकाशित मिति : २०७६ बैशाख ५
काठमाडौं । उसै त गर्मीको बेला । त्यसमा पनि खेलकुद स्थल नेपालगन्ज । यहाँको औसत तापक्रम ३८ डिग्री नाघिसकेको छ । तर पनि खेलाडीहरु निकै गरम जोशीका साथ प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । खेल जित्नु थियो । के स्वाद् ? उद्घाटन न समापन !
आफैमा यो देशको गौरव र प्रतिष्ठासँग जोडिएको बृहद आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता । खेल सकिदै गर्दा यसको औपचारिक उद्घाटन बिहीबार साँझ राष्ट्र«पति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा गरिने गरी साइत जुराइएको छ ।
नेपालमा हुने र हुँदै आएका प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल अगावै हुने गर्दथ्यो, तर खेल पहिले नै खेलेर सिध्याए पछि खेलाडीहरु प्रशिक्षक र पदाधिकारी आ–आफ्ना घर फर्किसकेका छन् । आठौं खेलकुदमा समावेश खेलहरु एक साता अघिदेखि नै सुरु भइसकेका छन् र सिद्धिइसकेका पनि छन् ।
आएका खेलाडीहरु पनि खुश छैनन् । उनीहरुको मानसिकता पनि उद्घाटन अघि नै खेल सकेर फर्कनु पर्दा बिग्रिएको पनि छ । कतिपय खेलका खेलाडी र पदाधिकारीले दुःखेसो समेत पोखेका छन् । ‘राष्ट्रिय खेलकूदको उद्घाटन नै भएको छैन ।